बजेट 'स्वाइलिङ' गर्दै अर्थमन्त्री
बजेट 'स्वाइलिङ' गर्दै अर्थमन्त्री अनावश्‍यक खर्च काट्न गाह्रो, नयाँ देखाउने मोह
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ६ जेठ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयले व्यस्तता बढाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको ६३ पेज २७६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदबाट पारित भइसकेको छ ।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सदन अर्थमन्त्रीले पेस गरेको मर्मअनुसारको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता साथै राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुसार आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको पर्खाइमा रहेको छ ।
छरितो र कार्यन्वयनमुखी बजेट ल्याउनको लागि तारन्तार सरोकारवालाले सुझाव दिए पनि अर्थ मन्त्रालय बजेट घटाउने वा सानो बनाउने पक्षमा देखिएको छैन । राष्ट्रपतितले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि यस्तो प्रस्तुति दिइएको छ ।
बजेट भाषामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वाइलिङ (जति सक्यो तन्क्याउने, फुल्याउने)मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारवालाले अधिकतम् १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने आधार भएको बताए पनि अर्थ मन्त्री स्वयंले बजेट बढ्ने संकेत पटक-पटक गरेका छन् ।
१६ खर्ब ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी
अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार बजेट अन्तिममा दिनसम्म अर्थात जेठ १४ गतेसम्म २०/२५ अर्ब रकम तलमाथि हुन सक्ने भए पनि बजेट सवा १६ खर्बलाई नै केन्द्रित गरेर बनाइँदै छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठूलो बजेटको बाध्यता भएको बताउने गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्वको स्रोतमा पर्ने प्रभाव वैदेशक सहायताबाट पूर्ति गरिने बताएका छन् ।
विगतका वर्षमा अर्थका सचिव तथा बजेट र राजस्व महाशाखा सह-सचिवहरूले पनि बजेटमा कतिसम्म सीमा राख्ने र बढाउदा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर जोखिम देखाउने गरे पनि पछिल्ला वर्षमा भने अर्थमन्त्री स्वयंले अंक तोक्ने, महत्वपूर्ण कार्यक्रममा रकम काट्ने र जोड्ने कार्यमा समेत सक्रिय रहेका छन् ।
बजेट परिपक्क र स्वस्थ हुनु पर्ने मान्यता राखिन्छ । बजेट भाषामा स्वfइलिङ शब्दले खराब बजेटको संकेत गर्दछ । सामान्यतया स्रोतको सुनिश्चितता नहुने तर कतिपय अस्वभाविक अनुमानको भरमा पनि बजेट अंक ठूलो गराइने कार्यलाई बजेट स्वाइलिङ भन्ने गरिन्छ ।
खर्च कटाउन सकिने क्षेत्रमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र चर्चाकै लागि केही नयाँ कार्यक्रम थालनी गरेको अर्थकै अधिकारीको गुनासो रहेको छ ।
आगामी बजेटमा स्रोतको जोहो : राजस्वमा परेको चाप सहायताबाट पूर्ति गरिने
सार्वजनिक खर्च पुनारावलोकन आयोगले अहिलेको बजेट देखिएको खर्चमा ४ खर्ब खर्च घटाउन सक्नेगरी प्रतिवेदन बजाए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको छैन ।
सामान्यतय स्रोत कति उठ्छ भनेर बजेटको गर्नु पर्नेमा पहिले बजेटको आकार निर्धारण गरेर स्रोत खोजी गरिएको छ । 'बढाउन सक्ने बाह्‍य ऋण र अनुदान अहिले निकै बल गरिएको छ, आन्तरिक ऋणको सीमाभन्दा माथि जाने कुरा भएन' अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने 'नपुगेको रकम राजस्व भन्ने कुरा हुन्छ र राजस्वमा कुन क्षेत्रमा कति असुली गर्न सकिन्छ भनेर लक्ष राख्ने हो ।'
वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पूर्णरूपमा सम्झौता भएर बजेटमा राख्नु पर्ने भए पनि प्राम्भिक सम्झौताका आधारमा बजेट राख्न थालिएको कतिपय अधिकारीको भनाइ रहेको छ । 'कहाँ, कसरी कति खर्च गर्ने सबै कुरा टुंग्याएर वैदेशिक ऋणको अनुमान गरिनुपर्ने हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा प्रारम्भिक सम्झौताका आधारमा पनि बजेटमा उल्लेख गरिने गरेको छ' एक अधिकारीले भने ।
चर्चित कार्यक्रममा बजेट भन्यो पछि न त्यो रकम खर्च गर्ने आधार हुन्छ न रकम नै आउछ अनि सम्बन्धित मन्त्रालयलले काम नगरेर ल्याउन सकेन भनेर अर्थ चोखिने गरेको देखिएको छ ।
संकटको बेलामा पनि यति ठूलो स्रोत खोज्यो भनेर देखाउने महत्वाकांक्षा सरकारलाई भएको अर्थका केही अधिकारी बताउँछन् । अर्थकै केही अधिकारी भने बजेटको माग र पूरा कार्यक्रम पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यताको कारण ठूलो बजेट ल्याउनु आवश्‍यक रहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको पहिलो बजेट ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । अर्थकै अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको दोस्रो बजेट पनि अधिकतम् खर्च १३ खर्ब हुने देखिएको थियो । यद्यपि कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्नको लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनले साढे ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्न पनि गाह्रो भएको देखिएको छ ।
बजेट प्राथमिकता : केन्द्रले सांसदलाई पैसा बाँड्दा पालिकाले वडाध्यक्षलाई किन नबाँड्ने ?
तेस्रो बजेट पनि खर्च नहुने भएपछि स्रोत देखाएर ठूलो नै ल्याउने होडमा अर्थमन्त्री देखिएका छन् । अर्थमन्त्रीले सांसद विकाष कोषलगायतका उपलब्धि कम आर्थिक भार बढी भएका कार्यक्रममा जाने रकम यसै पटक हटाउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना भए पनि त्यतातर्फ केन्द्रित देखिएका छन् ।
उनले सासदको एक स्वर आएपछि मात्रै यस्ता कार्यक्रमका विषयमा विचार गरिने बताएका छन् । सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदले सांसद विकास कोषको कार्यक्रम निरन्तरता दिन दबाब दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले पहिलो बजेटमा बजेट अनुशासन कायम गर्नको लागि केही कदमहरू अघि सारे पनि त्यसपछि भने आफैँ थकित देखिएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।
बजेट अर्थभित्र 'लक', सकिए ३ चरणका ब्रिफिङ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७, १६:३६:००